सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ले नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको सम्त्रन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ।
कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकिएको समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नगर्ने दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिपर्पोजसँगको ठेक्का रद्द गर्दै यी कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। कम्पनीको आइतबार बसेको वैठकले यी दुई कम्पनीले राखेको करिब रु. साढे नौ करोड ब्यांक धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो।
के नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव छ?
खेतीको मुख्य सिजनमा देशभर किसानले मलको चरम अभाव व्यहोरिरहँदा नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । के नेपालमा अहिले नै रासायनिक मल उत्पादन सम्भव छ ?
महामारीबीच किसानलाई मल अभावको पिरलो, जोखिम मोल्दै लाम लागे पनि पाउँदैनन् अहिले युरिया मलको माग उच्च भए पनि बन्दाबन्दीका कारण समयमा आपूर्ति हुन नसक्दा किसान मारमा परेका छन्। मल अभावबाट वर्षे धान बाली प्रभावित बन्दा उब्जनी घट्ने किसानको चिन्ता छ।
कृषि अनुदानमा लूट: किसानको नाममा कर्मचारी, परामर्शदाता र नक्कली किसानको यो हदको रजाइँ व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा चरम स्तरको अनियमितता भएकोबारे विश्व ब्यांककै छानबिनले खुलासा गरे पनि सरकारी निकायले कारबाही अगाडि बढाएको छैन।
रासायनिक मल माग्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बांग्लादेशी समकक्षीलाई टेलिफोन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन संवाद गरेर रासायनिक मल सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्।
तीन हजार टन मल नेपाल आइपुग्यो, ३२ हजार टन आउँदै बिरगञ्ज र विराटनगरमा बुधबार तीन हजार टन युरिया मल आइपुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार आइपुगेको मल बिहीबारबाटै बितरण शुरु गरिने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्व ब्यांकको छानबिनको खुलासाः किसानका नाममा आएको अनुदानमा अर्बौं लूट विश्व ब्यांकको सहयोगमा किसानका लागि सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा भएको अनियमितताको सांगोपांग चित्र देखाएको विश्व ब्यांकले दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र समेत पठाएको छ।
साल्ट ट्रेडिङले सोमबारदेखि युरिया मल वितरण गर्ने साल्ट ट्रेडिङ विराटनगरले रासायनिक मलको अभाव टार्न आइतबारदेखि निश्चित मात्रामा बितरण गर्ने भएको छ।
१३ लाख हेक्टरमा रोपियो धान, १५ प्रतिशतले बढ्याे रोपाइँ यो वर्ष हालसम्ममा १३ लाख ११ हजार २९९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १४ साउनमा जारी गरेको १२ साउनसम्मको तथ्यांक अनुसार देशैभरको धान रोपाइँ गत वर्ष २०७६ को तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको छ।
धान रोपाइँ ३७ प्रतिशतले बढ्यो, असार तेस्रो सातामै ६० प्रतिशत सकियो देशैभर धान रोपाइँ ६०.६३ प्रतिशत सकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २३ असारमा जारी गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार असार तेस्रो साता २२ असारसम्ममा देशैभर धान रोपाइँ ८ लाख ३१ हजार ६१२ हेक्टरमा भएको छ ।
देशैभर धमाधम धान रोपिंदै, युवाशक्ति गाउँगाउँ पुगेकाले उत्पादन बढ्ने समयमा नै वर्षा भएकोले बन्दाबन्दीसँगै किसानले जसोतसो बीउको जोहो गरेर धान रोपाइँ थालेका छन् । अब सरकारले आवश्यक रासायनिक मल अभाव हुन नदिने हो भने यो वर्ष धान उत्पादन र रोपाइँको क्षेत्रफल विगतका वर्षहरुको तुलनामा बढ्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयको छ।
तरकारीमा परनिर्भरता: आयातमा रोक लगाउन कति सम्भव ?
किसानको आत्मबल उकास्दै आत्मनिर्भरतातर्फ जान बर्सेनि विदेशबाट आयात हुने रु. १४ अर्बभन्दा बढीको तरकारी विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।